Veros စျေး - အွန်လိုင်း VRS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Veros (VRS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Veros (VRS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Veros ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $38 268.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Veros တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Veros များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
VerosVRS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0342VerosVRS သို့ ယူရိုEUR€0.0288VerosVRS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0261VerosVRS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.031VerosVRS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.304VerosVRS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.215VerosVRS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.752VerosVRS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.127VerosVRS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0453VerosVRS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0476VerosVRS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.751VerosVRS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.265VerosVRS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.185VerosVRS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.56VerosVRS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.77VerosVRS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0468VerosVRS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0522VerosVRS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.06VerosVRS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.237VerosVRS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.64VerosVRS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩40.54VerosVRS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦13.19VerosVRS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.49VerosVRS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.934
VerosVRS သို့ BitcoinBTC0.000003 VerosVRS သို့ EthereumETH0.00009 VerosVRS သို့ LitecoinLTC0.000628 VerosVRS သို့ DigitalCashDASH0.000376 VerosVRS သို့ MoneroXMR0.000384 VerosVRS သို့ NxtNXT2.66 VerosVRS သို့ Ethereum ClassicETC0.00503 VerosVRS သို့ DogecoinDOGE9.86 VerosVRS သို့ ZCashZEC0.000415 VerosVRS သို့ BitsharesBTS1.05 VerosVRS သို့ DigiByteDGB1.09 VerosVRS သို့ RippleXRP0.121 VerosVRS သို့ BitcoinDarkBTCD0.00118 VerosVRS သို့ PeerCoinPPC0.113 VerosVRS သို့ CraigsCoinCRAIG15.56 VerosVRS သို့ BitstakeXBS1.46 VerosVRS သို့ PayCoinXPY0.596 VerosVRS သို့ ProsperCoinPRC4.29 VerosVRS သို့ YbCoinYBC0.00002 VerosVRS သို့ DarkKushDANK10.96 VerosVRS သို့ GiveCoinGIVE73.98 VerosVRS သို့ KoboCoinKOBO7.78 VerosVRS သို့ DarkTokenDT0.0315 VerosVRS သို့ CETUS CoinCETI98.66